वित्तीय साक्षरता Archives ~ Page4of 25 ~ Banking Khabar
अर्थतन्त्रमा हुण्डीका हानीहरु
बैंकिङ खबर । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भनिन्छ । रेमिट्यान्सबाट देशलाई प्राप्त हुने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । हामीलाई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम …
बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतकोे ग्रामीण स्वालवलम्बन कोष ०४७ सालमा स्थापना भएको हो । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकत प्रयोग गरी न्यून आय भएका सर्वसाधारणको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले यो कोष सुरु गरेको हो । यसका …
बैंकिङ खबर / पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किन त्यस्तो भयो त ? किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि …
बैंकिङ खबर / धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत माघ १ गतेदेखि प्राथमिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्न डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको छ । यद्यपि, कतिपयलाई डिम्याट खाता के हो ? कसरी खोल्ने यो खाता ? जस्ता सामान्य सामान्य जानकारी पनि …
आरपी पौडेल. बैंकिङ खबर / सामान्यअर्थमा भन्नुपर्दा व्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा नै व्याजदर करिडोर हो । करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल व्याजदर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । व्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि स्थायीत्व कायम रहन्छ । …
बैंकिङ खबर । धितोपत्र (सेयर)को सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने आवेदकको पैसा धितोपत्रको बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म आवेदककै बैंक खातामा रोक्का हुने व्यवस्था आस्वा प्रणाली हो । लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट दरखास्त संकलन गर्न अनुमतिप्राप्त र आफ्नो खाता रहेको बैंक …
साधारण सभा किन गर्ने ? नगर्दा के हुन्छ ? हेर्नुस् कानुनी प्रावधान
बैंकिङ खबर / साधारणसभा भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीमा हक भएका शेयरवालाहरूको संयुक्त बैठक भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतया हरेक वर्षमा एकपटक शेयरवालाहरूले कम्पनीको विविध पक्षका बारेमा छलफल गर्नका लागि औपचारिक कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । सोही औपचारिक कार्यक्रमलाई साधारणसभा भनिन्छ । साधारणसभालाई शेयरवालाहरूले …
बैंक खाता के हो ? कसरी खोल्ने ? (हेर्नुस् बैंक खाताको महत्व र आबश्यकता)
बैंकिङ खबर / खाता एक प्रकारको कारोबार विवरण हो । सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाको रकम जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थाको नाममा खाता खोलिदिने र उनीहरुको नाममा रकम राख्न र झिक्न पाइने गरी दर्ता गरिदिने विवरण …
बैंकबाट ऋण लिनुपूर्व जान्नुपर्ने कुराहरु
बैंकिङ खबर । भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरि लिइएको रकम कर्जा वा ऋण हो । सामान्यतयाः ऋण प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गर्दछ भने कर्जामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभुती पनि पर्ने गर्दछ । बैंकहरुले संकलित निक्षेप तथा पुँजी बिभिन्न क्षेत्रमा …
व्याज मुल्तबीको प्रभाव कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार कर्जा लगानीमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नगदमा प्राप्त भएमा मात्र आम्दानी जनाउन पाउँछन् । तर, बुझाउनु पर्ने निर्धा्रित समय पुगेको ब्याज पनि नगदमा प्राप्त नभएसम्म त्यस्तो ब्याजलाई ‘ब्याज मुल्तबी’ हिसाबमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै, उठ्नुपर्ने भाका नाघेर खराब …